Ọ bụ bụla na nzuzo na android na IOS sistem nwere ọdụm òkè mgbe ọ na-abịa ekwentị ahịa esighịkwa ọnụ ọgụgụ nke ngwa otu onye nwere ike nwere ohere. Dị otú ahụ bụ ewu ewu na-ruo n'ókè nke na ọtụtụ n'ime anyị emewo ndị a smartphones dị ka Mgbe ụfọdụ, ị chọrọ ịnọgide na-jide ndị chọsiri ike inweta SMS ozi na ekwentị gị ma eleghị anya ị na-eche nke ụzọ kasị mma kwado ha. Otu oké PC na ngwa na-ga-eme anwansi n'ihi na ị bụ Wondershare Mobiletrans.
Wondershare Mobiletrans Atụmatụ
Wondershare Mobiletrans bụ ngwá ọrụ na-abịa na a dịgasị iche iche nke atụmatụ na ịma mma ịbụ na nke a ngwa nwere scalable arụmọrụ na suut ọrụ si a ọtụtụ nke na ekwentị mkpanaaka nyiwe.
Ọ bụghị nanị na ọ ekwe ka nyefe nke SMS n'etiti IOS na android ntị, ma ọ na-akwado Symbian na blackberry igwe.
The software nwere ike arụnyere na Mac na Windows kọmputa bụghị na-echefu na ọ ga-eji nyefee a dịgasị iche iche nke ọdịnaya n'etiti ekwentị mkpanaaka na nke fọrọ nke nta ọ bụla OS na Personal kọmputa dị ka mma.
Ọ na-ekwe ala ekwentị backups
Ọ na-ekwe nlaghachie nke backups android na IOS ngwaọrụ
Ọ nwere ike na nyefee iTunes ọdịnaya ka a na-akwado ngwaọrụ
The software ike ga-eji ihichapu ekwentị n'enweghị
Ichekwa ndabere SMS
Ugbu a na ị nwere otu nnyocha nke ndị atụmatụ na Wondershare Mobiletrans, ugbu a, anyị na-a peek na otú i nwere ike ndabere SMS si gị android ma ọ bụ IOS smartphones. Ihe mbụ ị ga-mkpa ime bụ download Wondershare Mobiletrans si ukara saịtị na-http: //www.wondershare.com/phone-transfer/.Make n'aka na ị na-ahọrọ nri lekwasịrị n'elu ikpo okwu na-adabere na sistemụ arụmọrụ gị PC. Mgbe nbudata software, ị ga-mkpa iji wụnye otu ihe ahụ ma ẹkedori ya.
Ndabere SMS gaa na ekwentị ọzọ
Dị ka e kwuru na aga na ngalaba, software-enye gị ohere ndabere gị ozi smartphones na PC gị arụnyere na software. N'ezie a na-adabere na gị onwe gị mmasị. Ndabere gị data na ọzọ smart ekwentị, ị ga-mkpa ijikọ ekwentị abụọ na kọmputa na iji USB ọdụ ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ na ndị njikọ ziri ezi, abụọ smart igwe kwesịrị egosi na software interface.
The ọzọ ihe ị chọrọ ime bụ họrọ ozi ederede site na ndepụta nke n'etiti na pịa Malite Copy idetuo faịlụ na ebe ekwentị. NB Cheta na-uncheck ndị ọzọ site na ndepụta iche site Text Ozi
Ndabere SMS ka a Computer
Ndabere gị ozi na kọmputa gị ị ga-mkpa jikọọ ekwentị na ozi wee họrọ ndabere nhọrọ ke ufọk menu. Ekwentị gị ga-abịa na interface na ndepụta nke ihe ndị ahụ nwere ike depụtaghachiri n'etiti. Ego iji họrọ na ozi ederede na pịa Malite Detuo. NB Cheta na-uncheck ndị ọzọ site na ndepụta iche site Text Ozi
Iweghachi Your kwadoo Ozi
Ugbu a na ị maara otú ndabere na ozi, ọ dịkwa nnọọ mkpa ịmata otú naghachi ha .Mgbe niile, e nweghị ebe na-akwado ha ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ka weghachite ha na ụfọdụ ebe n'ọdịnihu. Iweghachi gị ozi, ị ga-mkpa ẹkedori ngwa na jikọọ ekwentị na-ịchọrọ ị na-echekwa natara ozi ederede eji a USB maka njikọ.
Na n'ụlọ interface, họrọ Weghachi nhọrọ. The dobe ala menu ga-enye nhọrọ-họrọ ndabere faịlụ Ọkpụkpọ. Ị ga-kpaliri aka ịchọta ebe ị na echekwara nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Niile i nwere ime bụ ịchọta ndị faịlụ, họrọ faịlụ, ego na ozi ederede na pịa Malite Copy idetuo ozi iche na ekwentị.
The oké ihe na nke a software bụ na ọ na-enye ohere ọrụ iji weghachite backups mere site ndị ọzọ isi software na nyiwe. Ọ bụrụ na ị mere backups na iCloud, MobileGo na iTunes.
Nke a bụ nnọọ ihe nnyocha na otú MobileTrans nwere ike iji ya iji chekwaa ozi ma oké akụkụ bụ na a software na ị nwere ike ndabere nza nke ọzọ dị mkpa stof dị ka mma. Ị nwere ike iji ya nyefee Music, videos, ngwa ọdịnala, kọntaktị, kalenda, foto na oku na ndekọ. Na n'elu nke, i nwere ike iji software na-eji software ka ịnyefe ọdịnaya echekwara na iTunes. Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, ị pụrụ iji ya nyefee backups si iCloud nnọọ bụrụ na ị nwere iPhone ma ọ bụ ihe ọ bụla IOS ngwaọrụ.
Ndị dị mfe, Wondershare Mobiletrans bụ ngwá ọrụ na-anapụta àgwà na ekwentị data transfer esighịkwa ya vasatail atụmatụ. Ya mere, ya oge unu gburu ụmụ nnụnụ ndị na nanị otu otutu site na-a ngwa. Okwu nke uru maka ego na ị na-eche ihe Wondershare Mobiletrans ga-enye tụnyere ndị na-eri nke na-a zuru version nke otu.
> Resource> iOS Data Recovery> Olee otú ndabere SMS na ma android na iOS.